Ukuphikisana kwesonto -
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 29, 2020 00: 20 Awekho amazwana
"Impikiswano ivulekile! Ohulumeni be (amazwe ase-Afrika) abanendaba nabantu. Futhi cabanga ukuthi kungenxa yokubonga uNkulunkulu wabo ka-Israyeli wase-Afrika e-Afrika ukuthi izifo eziwumshayabhuqe ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 22, 2020 00: 20 Awekho amazwana
"Impikiswano ivulekile! Asikho isithombe esibi ukwedlula leso sowesifazane, umama ovusa abafowabo nodadewabo ukuba bazonde. Ngo-jargon, babizwa ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 14, 2020 00: 20 Awekho amazwana
"Impikiswano ivulekile! BB, ngilambile. Lapho, uba yiWorld Food Program (WFP) yayo; BB, ngidinga izinkulungwane ezingama-200 ukuvula i-salon yami yezinwele. Lapho, uba ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 7, 2020 00: 20 Awekho amazwana
"Impikiswano ivulekele wonke umuntu! "Lokho kusho ukuthi, abamnyama / ama-Afrika akayona into yabantu? Noma kungumbuzo wezinto eziyinkimbinkimbi ?? Esikholelwa kukho okuyize, kufingwe ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-February 29, 2020 00: 20 Awekho amazwana
"Impikiswano ivulekile! »Owesifazane ofana nalokhu ngokuba ngudade kuKristu futhi okuthiwa ushumayeza igama elihle futhi uvusa abantu ukuba babe nesimo esihle kungaba nalo lolu hlobo ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-February 22, 2020 00: 20 Awekho amazwana
"Impikiswano ivulekile! "Ngemuva komshado, ushintsha igama lakhe futhi manje ubizwa ngegama lomyeni wakhe, ushintsha i-domicile yakhe, ashiye umndeni wakhe, akushiye, uvele akushiye nalokhu ...	Funda kabanzi
Kuyamangaza ukuthi i-Holy Holy kanye ne-Holy Quran ziyizincwadi ezimbili ezihunyushwa kakhulu ezilimini zase-Afrika. Futhi lokhu kuhumusha kwenza lezi zincwadi ezifanayo ukuthi zifundwe kakhulu, bese kuthi ezithengiswa kakhulu e-Afrika "Bangabathengisi bangempela bawo wonke amagumbi amane e-Afrika"
March 30, 2020 03: 12